Jihaynta Ardayda Cusub »Jaamacadda Hodges
Ku soo dhowow Jaamacadda Hodges!
Hanuuninta Ardayda Cusub ee Jaamacada Hodges (NSO) waxay ka caawineysaa Hodges 'Hawks inaan udiyaar garowno khibradaada waxbarasho!
Badhannada hoose ayaa kugu hagi doona nidaamka waxayna ku siin doonaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Jaamacaddayada. Hadda bilow oo dib u booqo waqti kasta oo aad caawimaad ugu baahan tahay.
Fariin ka timid Madaxweyne Dr. Meyer
Jaamacadda Hodges - oo ah hay'ad samafal ah oo gaar loo leeyahay - waxay ardayda u diyaarisaa inay ka faa'iideystaan ​​barashada sare shaqooyinkooda shaqsiyadeed, xirfadeed, iyo midda bulshada.
Si aad wax badan uga ogaato sababta ay Jaamacadda Hodges u tahay jaamacad gaar ah oo ku taal Koonfur-galbeed Florida, guji halkan.
La kulan Madaxweynaha
Dhismaha Xarunta Dhismaha ee Fort Myers U iyo H
Dhismaha Xarunta Fort Myers U
Gargaarka Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka Ardayda
Adeegyada Ardayda, Diiwaanhayaha, iyo Ogolaanshaha
Ururka Midowga Ururka Sayniska Caafimaadka - U
Isdiiwaangeli khadka tooska ah adoo adeegsanaya HU Is-Adeeg
HU Is-Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iska diiwaangeliso ama aad codsato diiwaangelin koorso kasta oo ka mid ah kal-fadhiga soo socda, 24/7, 100% khadka tooska ah:
Gal gudub myHUgo
Hoosta HU Is-Adeegga qaybta, dhagsii Diiwaangelinta iyo Qorshaynta Degree
Si loo xaqiijiyo jadwalkaaga koorsada, guji Qorshaha iyo Jadwalka
MyHUgo & HU Is-Adeeg
MyHUgo waa bogga internetka ee adeegyada ardayda ee Jaamacadda Hodges halkaas oo dhammaan ardayda ay si dhakhso leh ugu heli karaan HU Is-Adeeg. Iyada oo myHUgo, waxaad ka heli kartaa macluumaadkaaga shaqsiyeed isla markaana ku qaban kartaa ganacsigaaga jaamacadda khadka tooska ah.
Markaad gasho bogga MyHUgo xiriir emailkaaga ah ayaa ka muuqda bogga ugu weyn. Hodges waxay u adeegsan doontaa koontada emaylka ee ardayga inay tahay hab rasmi ah oo lagula soo xiriiro.
Soo gal MyHugo
Canvas waa Nidaamka Maareynta Barashada tooska ah ee Jaamacadda Hodges ee Nidaamka Maamulka, halkaas oo macallimiinta iyo ardaydu ay ka heli karaan agabyada koorsada, u soo gudbin karaan shaqooyinka, kula xiriiri karaan ugana wada shaqeyn karaan khadka tooska ah.
Kheyraad & Taageero Dheeraad ah
Jaamacadda Hodges waxay leedahay koox IT u gaar ah oo ka caawisa ardayda arrimo farsamo oo kala duwan oo laga yaabo inay haystaan. Ardaydu way soo gudbin karaan oo la socon karaan codsi ku saabsan taageerada tikniyoolajiyada khadka tooska ah, waxayna raadin karaan cilad-is-caawinta iyo sida loo helo macluumaadka. Ardaydu waxay isticmaali doonaan cinwaankooda 'Hodges' iyo eraygooda sirta ah si ay u galaan.
IT Caawinta Miiska Taageerada
Maktabadaha ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan xulashada iyo helitaanka ilaha. Haddii aad u baahan tahay caawimaad inaad ka baarto kaydka maktabadda ama hagidda buug-gacmeedka APA, shaqaalaha maktabadda ayaa lagu heli karaa shakhsi ahaan, taleefan ama emayl.
Buug-gacmeedka ardaygu wuxuu u adeegi doonaa hagitaan markaad bilawdo oo aad sii wadato xirfaddaada waxbarasho ee Jaamacadda Hodges.
Buug-yaraha jaamacaddu wuxuu u adeegi doonaa hage loogu talagalay siyaasadaha tacliinta hay'adeed ee gaarka u ah barnaamijyada tacliinta ee Jaamacadda Hodges.
Shuruudaha Isdiiwaangalinta & Xaaladaha
Shuruudaha diiwaangelinta iyo shuruudaha waxay siinayaan heshiiska u dhexeeya ardayga iyo Jaamacadda dhammaan ujeeddooyinka diiwaangelinta koorsada.
Bogga Kheyraadka Ardayga
Bogga ilaha ardayda ayaa loo heli karaa dhammaan ardayda halkaas oo aad ka heli doontid manhajka koorsada, saacadaha xafiiska macallimiinta, daabacaadaha, iyo macluumaadka xiriirka ee waaxaha kale ee jaamacadda. Ardaydu waxay ku heli karaan boggan markay galaan MyHUgo.
Xirmooyinka Gargaarka Maaliyadeed
Xirmada kaalmada maaliyadeed waxay ka koobnaan kartaa isku darka deeqaha, amaahda, iyo / ama maalgelinta daraasadda shaqada. Helitaanka abaalmarintan waxay kuxirantahay heerka lacagaha la heli karo iyo u qalmidaada sida lagu go'aamiyay Codsiga Bilaashka ah ee Gargaarka Ardayga ee Federaalka (FAFSA).
Waxbarashada & Khidmadaha
Kooxda Xisaabaadka Ardayda ayaa kaa caawin kara biilka, fahamka waxbarashada iyo khidmadaha, dejinta qorshayaasha lacag bixinta, iyo inbadan.
Jaamacadda Hodges waxay bixisaa ikhtiyaarro kala duwan oo qorshe lacag bixin ah oo lagu bixiyo kharashka waxbarashada iyo khidmadaha bil kasta iyadoo loo marayo kal-fadhiga. Macluumaad intaas ka badan, ardaydu waxay geli karaan MyHUgo oo ay aadi karaan Macluumaadka Akoonka Ardayga.
Jaamacadda Hodges waxay iskaashi la samaysay BankMobile si ay u siiso ikhtiyaarro dheeri ah iyo helitaan dhaqso ah soo celintaada.
Adeegyada Milatariga iyo Halyeeyada
Jaamacada Hodges, waxaad kaheli doontaa in saaxiibtinimada militariga aysan kaliya aheyn wax aan dhahno, waa heer taageero ah oo aad uga fog fasalka.
Xafiiskayagu Waaya aragnimada Ardaygu wuxuu leeyahay lataliyeyaal arday oo u heellan inay halkan ka caawiyaan ardayda inay horumariyaan qorshooyinka waxbarasho ee muddada-dheer ayna dejiyaan yoolalka muddada-gaaban ee lagu gaarayo qorshayaashaas.
Ka wac Talabixinta tacliinta 800-466-0019
Emailka Kala talinta tacliinta
Adeegyada Xirfaddu waa u il-bilaash ah ardayda iyo qalin-jabiyayaashu inay wax badan ka bartaan xirfadaha ay doorteen iyo inay horumariyaan qorshooyinka mihnadeed.
Jaamacadda Hodges waxay si firfircoon u taageertaa xuquuqda ardayda naafada ah si ay fursad siman ugu helaan waxbarashada.
Jaamacadda Hodges waxaa ka go'an inay abuurto oo ay ilaaliso jawi waxbarasho halkaas oo dhammaan dadka ka qayb qaata waxqabadyada Jaamacadda ay si wada jir ah wax ugu baran karaan jawi ka madax bannaan dhammaan noocyada dhibaataynta, dhiig-miirashada, eexda, eex ama cabsi gelin.
Xuquuqda Asturnaanta (FERPA)
Marka loo eego tilmaamaha FERPA, ardaydu waxay xaq u leeyihiin (1) inay baaraan oo ay dib u eegaan diiwaanka ardaydooda, (2) inay raadsadaan wax ka beddelka diiwaanada, (3) ogolaanshaha shaacinta, iyo (4) inay soo gudbiyaan cabasho.
Xafiiska Amniga ee Jaamacadda Hodges wuxuu mudnaanta siiyaa amniga ardayda waqti kasta oo ay xaruntu furan tahay.
Hambalyo, Waxaad dhameystirtay hanuuninta ardayda cusub!
Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad barato jaamacada Hodges iyo waaxda taakulaynta ardayda ee ay heli karaan ardayda oo dhami. Arday ahaan, waxaad marin u yeelan doontaa degelkan inta aad ku jirto xirfaddaada Hodges. Ma sugi karno inaan aragno adiga oo maraya masraxa markay tahay xilligaaga qalinjabinta!
Hadda waxaad tahay Hawk. Eeg qaybta!
Waxaad ku muujin kartaa hankaaga dugsiga adoo internetka kaga adeeganaya Dukaankeena Hawks. Waxaad ka heli doontaa waxyaabo kala duwan oo aad isticmaali kartid, laga bilaabo USB drives iyo tumblers ilaa dharka, iyo Hodges Hawk! Maxaa ka dhiga dukaankeenna mid ka duwan? Iibsasho kasta oo la sameeyo, qayb ka mid ah lacagta ka soo baxda waxay ku dhacdaa Sanduuqa Hawks Scholarship.